Ninkaagii hore saaxiib kuu dhaw makuu noqon lahaa?
Monday January 28, 2019 - 10:00:29 in Wararka by Mogadishu Times
Haa, dabcan: "Qaar ka mid ah nimankii hore way wanaagsan tahay in saaxiib laga dhigto" ayay tiri Robbie Harb, oo ah haweeney 30 jir ah. Waxaan waligay umaleyn jiray in dhammaadka xiriirka labada qof uu yahay wax fudud. Balse dadka qaar ayaa
Haa, dabcan: "Qaar ka mid ah nimankii hore way wanaagsan tahay in saaxiib laga dhigto" ayay tiri Robbie Harb, oo ah haweeney 30 jir ah. Waxaan waligay umaleyn jiray in dhammaadka xiriirka labada qof uu yahay wax fudud. Balse dadka qaar ayaa rumeysan inaysan jirin sabab aad ula saaxiibto qof aad horey u kala tagteen. Waxaana taas ka fudud, inaa telefankiisa iska tirtirto, xayiraad ku qabato koontiyadiisa baraha bulshada, aadna iska tuurto wax walba oo gurigaada u yaaley. Waa hagaag, bal ka waran saaxiibkey B, maxaa dhacay? Si ka duwan ninkeygii hore, kulama kulmin B baraha bulshada amase si gaar ah goobaha lagu caweeye. Waxuu ahaa saaxiibkey aan jeceyl badan u qabay. Waxaan ku barbaarnay magaalada Sydney waxaana yeelanay xiriir dhaw oo kobcayay ilaa yaraanteeni. Waxaan wadaagnay wax walba ilaa iskuulka ayaan isla soo dhiganay, waxaan wadaagno dhibaatooyinka qoyskeena lasoo gudboonaado. Waxaan bilownay inaan banaanada isku raacno horaantii labaatameeyadeenii, kaddibna waxuu dhowr sano kaddib ku laabtay Sydney. Xiriirkeenu wuu wanaagsanaa, mar wuu xumaa, sheeko kasto oo na dhexmartana muran ayay ku dhammaanaysay.
Lahaanshaha sawirkaVICKY LETA Image caption.
Cali Cumar Guuleed oo ka warramaya gabayada laga tariyay jeceylka la calfan waayay
Labadeenaba waan dareenay in xaalku maalintaasi noo hagaagay. "Marka sidaas ayaan umaleynaya?" ayaan ku iri. "Haa," ayuu iigu jawaabayhe said. "Sidaas ayaan umaleynayaa." Maalmo yar uun kaddib waa uu baxay. Dhowr bilood ayaan wada nooleyn wax digniin ahna ima uusan siinin. Maalin wuu imaanayay maalina wuu iska maqnaanayay.
Lahaanshaha sawirkaVICKY LETA
Kaddibna waxaan helay fariin hal erey uun ay ku qoran tahay: "Kofee?" Waxay ahayd fariintii ugu gaabneyd ee aan waligey arko, balse macno iima sameyneyn."Markii?" Aan u qoray. Waan kulanay- Sodon ilbiriqsi gudahood oo aan isha ku dhuftay, Waxaan xiqiiqsaday inaanan waxba jeceyl ah u fekerayay inaa ku boodo ama feer ku qabto, balse waan isdejinayay. Kulankaasi wuxuu ii xaqiijiyay sida aan ugu xiisay iinuusan ahayn ninkeyga keliya ee uu yahay sidoo kale saaxiibkey.
Ma guriga ayaa ah meesha ugu badan ee haweenka Soomaalida lagu dilo?
Aniga oo ogeyn ayaan ka fekeri jiray tallaaba kasta oo uu qaadayo waxaana xasuusan jiray sida uu jeceylka wax uga yaqaano. Aad ayaan uga maseeri jiray markii uu ka hadlo arrimaha gabdhaha kale balse markuu aniga iga hadlayo aad baa u niyad fiicnaan jiray. Sikastaba, inaa soo afjarno xiriirkaas ayaa sidoo kale ahayd midka mid ah go'aamadii ugu wanaagsanaa ee nolosheyda aan gaaro. Xiriirkii aan la yeeshay ninkeygii hore aad ayuu u qoto dheera, aad ayuu u dhib badnaa.
Maanta, ninkeygii hore waa qofka keliya aan fariin u diro maalinka farxada dhalashadiisa. Isna sidaasi oo kale ayuu iigu soo diraa. Taasina waa farin muhiim ah, balse meel fog gaareysa. Sababtoo ah xiriirkeena waxuu qaataa waqti xadidan oo ka mid ah nolosheena - xiliyadii hore- waxaana ogaaday in meel kale uusan ku habooneyn waqtigaas. Iyadoo ogsoonahay in xiriirku yahay tallaabada ugu horreyso oo qofwalba uu ku dhaqaaqo.